Basket-ball - Lalaon’ny nosy 2019 :: Matoky ny ekipany ny mpanazatra nasionaly • AoRaha
Basket-ball – Lalaon’ny nosy 2019 Matoky ny ekipany ny mpanazatra nasionaly
Mivoatra hatrany ny ekipam-pirenena Malagasy, eo amin’ny taranja basket-ball hiatrika ny Lalaon’ny Nosy, amin’ny 19 hatramin’ ny 28 jolay ho avy izao any Maorisy. Miakatra ny hahavo teknikan’ireo mpilalao raha ny fihaonana fitsapana telo efa vita no jerena.
Efa samy eto an-toerana ihany koa ireo mpila ravina­hitra, Lahontan Rija, eo amin’ny lehilahy ary Rasoambolanoro Ange, eo amin’ny vehivavy. “Anisan’ny nanampy amin’ny fivoaran’ny mpilalao ny fandalovan’ny mpanazatra nasionalin’i Sénégal farany teo. Hita izany fivoarana izany eo amin’ny lafiny fanipazana sy fanomezana ary ny fitazonana ny baolina. Tsy lavitra ny lalana mankany amin’ny tanjona (medaly volamena)”, araka ny fanazavan-dRazafiarivony Angelot, tale teknika nasionalin’ny Federasiona malagasin’ny basket-ball.
Mbola hita ihany anefa, hoy izy, ny tsy fahaizan’ireo mpilalao mifehy tena amin’ny fahadisoana ataony, hoy ity tale teknika ity. Hitany izany nandritra ny fihaonana fitsapana notanterahina ny faran’ny herinandro lasa teo. Mandresy ireo mpifanandrina aminy anefa ny ekipa nasionaly isaky ny fitsapana. Nandavo ny ekipa voafantina ny lehilahy tamin’ny isa 98 noho 44. Mpilalao lehilahy
hatrany no mifandona amin’ireo vehivavy. Ady sahala (53 sy 53) kosa no nisarahany CBBT. Ny fiarovantena sy ny fiarahana ary ny fanomanan-tsaina no hifantohana amin’ity fampivondronana farany ity, raha ny voalazan-dRazafiarivony Angelot.
Baolina kitra- « Pro League 2019-2020 » Tafiditra tampoka ho isan’ny klioba hifaninana ny Elgeco Plus
Baolina kitra – CHAN 2020 Hitsapa farany ireo mpilalaon’ ny Barea ny mpanazatra
Baolina lavalava – « Mondial » Hitory i Ekôsy raha foanana ny fihaonany amin’i Japana
Baolina lavalava- « Gold Top 20 » Hanarina ny fahavoazany amin’ny Uscar ny Cosfa
Hazakazaka am-bisikileta :: Handray anjara amin’ny « Tour de Congo” ny delegasiona malagasy
Ahiahiana fandehanana mafy Namono olona roa indray ny taksiborosy
Fanahiana herisetra ara-nofo Mpianatry ny lisea bevohoka nitaraina ho naolan’ny zandary iray
Faradoboka 2019 Saika nofoanana noho i Fafah ny fampisehoan’ny tarika Mahaleo
Herisetra sy fifamonoana Adina mpivady nahafaty olona iraika ambin’ny folo